Raspbian OS: Yakagadziridzwa nezvigadziriso zveRaspberry Pi 4 rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi Foundation yakaparura nyowani yepamutemo vhezheni yeinoshanda system yeRaspi, iri pamusoro Raspbian OS. Iye zvino inouya nerutsigiro rwakagadziridzwa rweSBC yazvino, iyo Raspberry Pi 4. Inosanganisirawo zvimwe zvakawanda zvekuvandudza zvinhu uye kugadzirisa. Iyo itsva Raspbian 2019-09-26 mufananidzo wave kuwanikwa kurodha pasi uye kuyedzwa pabhodhi rako. Kuti uwane icho unogona kuzviita kubva pane iyi link pane iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti...
Ichi chitsva Raspbian OS mufananidzo unosanganisira rpi-eeprom chishandiso, icho ichagadzirisa otomatiki iyo SPI EEPROM kubva kune nyowani Raspberry Pi 4 bhodhi kune yazvino vhezheni vhezheni. Ehezve, iyo kernel pachayo uye mapakeji akagadziridzwa kune zvitsva zvinyorwa. Iye zvino inouya inofambiswa neLinux kernel 4.19.75, uye neChromium 74, VLC 3.0.8, RealVNC 6.5.0, RealVNC Viewer 6.19.715, Mathematica 12.0.1, Kukanda 3, Sonic Pi 3.1.0, NodeRED 0.20.8 , Thonny 3.2, uye Adobe Flash Player 32.0.0.255.
Uyewo Raspbian OS madhiraivha akagadziridzwa 2019-09-26. Pakati pevatyairi vakagadziridzwa pane NTFS-3G yeyakakurumbira yeMicrosoft faira system, uye yanga isiri iyo yega, zvakare yeFKMS, Bluetooth, odhiyo, rutsigiro rwekugadziridzwa kwakawanda-kuwanda kumisikidza, kumwe kuvandudzwa kune hukama nevatariri, nezvimwe. Nenzira, kunyangwe izvo zvinoshandiswa nePCI zvakagadziridzwa, Epiphany yabviswa, uye Leafpad yakatsiviwa neMousepad.
Uye hongu, sezvazvinowanzoitika mune dzakawanda kugadzirisa, futi mamwe madhiri akagadziriswa. Izvi zvakavandudza kuvimbika kweiyo Raspbian inoshanda sisitimu. Pakati pezvikanganiso zvakagadziriswa pane matambudziko nekubata ma URL muTerminal, octal values ​​mumaSSIDs mu networking plugin, kutumidzazve mazita ehutsika mune yekufambira mberi bar kana uchinjisa mafaera, yekutanga menyu pane isiriyo yekutarisa, kuvandudza mukubatanidzwa kwe Xarchiver ine maneja wefaira, uye mamwe matambudziko ane chekuita nekubviswa kweBluetooth pamapuratifomu eX86, shanduro, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Raspbian OS - Yakagadziridzwa nezvigadziriso zveRaspberry Pi 4 rutsigiro